Top 10 Mass Services qoraalka ee Suuqa
Fariin Mass wax yaabahan in kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto dhufsanayaasha fariimaha qoraalka ah si aad saaxiibo, macaamiisha iyo xataa shaqaalaha adduunka oo dhan. Sms Mass sanadihii la soo dhaafay ayaa la xaqiijiyey in ay hab fudud oo ka raqiisan badan ee xidhiidhka iyo suuq-geynta. Taasi waxay ka muuqataa tan iyo fariin qoraal kaliya lagu soo gudbin karaa iyada oo qaata kala duwan cayimay. Waxaa jira laba qof oo ah adeeg fariin ballaaran oo la soo saaray si ay u waayo-aragnimo ah, xataa si fiican! Maqaalkani waxa uu ku siinayaa qaar ka mid ah qoraalka tiro fariin app ugu fiican ee aad kala dooran karto.
Wondershare MobileGo - Maamul Messages Android iyo macruufka
Tani waa user saaxiibtinimo iyo fududahay in la isticmaalo madal SMS in sidoo kale aad u siineya nidaamka maamulka qabow. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad soo dirto fariin qoraal ah oo ballaaran, lambarada telefoonka edit iyo shaqada aad aad bookmark browser aad dooratay. Waxaa intaa dheer, waxa aad u saamaxaaya in ay xogta muhiimka ah gurmad, soo celiyo labada xogta si ula kac ah iyo ula kac loo tirtiray, oo nuqul ka fariimaha qoraalka ah iyo lambarrada telefoonka ee u dhexeeya telefoonada kala duwan. Ogsoonow in muuqaalada aasaasiga ah ee adeegan si dhab ah oo lacag la'aan ah!
Waa sahal in la dajiyo. Ku xiridda adeegan Sidaa darteed waa hab fudud oo lagu bilaabo la kulmi doonaan dhib ama wax yar.
Soo Celinta xogta. Waxa kale oo aad soo celin kartaa xogta laga masaxayo phone midkood cunto ula kac ahayn ee shakhsiyaad xanuunsan-ujeedadu.
Oo nabad iyo xasilooni. Ma aha in aad looga walaaco nabadgelyada iyo ammaanka xogta marka ay timaado in Bloove adeegyada.
Ka maqan qaababka kale ee aasaasiga ah. Tan iyo markii ay adeeggan ayaa weli soo koraya, Bloove ka maqan qaar ka mid ah muuqaalada muhiim ah.
Tani waxay adeeg fariin tiro kuu ogolaanayaa inaad u soo dirto fariin ka helay aad PC in dalal oo dhan iyada oo aan inta badan loo buunbuuninayo ah. Quruxda yahay in hawsha oo dhan waa wax fudud oo ku saabsan boorsada jeebka. Adeegga ayaa waxaa inta badan horumariyo ururada iyo ganacsatada.
Free gaadiidka. In inay jirto gaadiidka lahayn marka la isticmaalayo adeegyada. Tani waxay u ogolaaneysaa dadka isticmaala si ay u soo dheegato utility ugu badnaan la adeeggan.
Easy in ay isticmaalaan. Tani waxay u ogolaaneysaa newbies ku saabsan adeegyada qoraalka ballaaran si si fudud u maraan.
No rakibo loo baahan yahay. Marka aad leedahay adeegga aad bilaabi kartaa fariimaha diraya.
Caymiska. Its caymiska waxaa xadiday maadaama aanay dabooli dalal badan.
Tani waa tracker a free telefoonka gacanta iyo la socodka adeegyada telefoonka aad Android. Waxaana ay ku aaddan taariikhda browser, fariimaha qoraalka ah, wicitaanada, MMS, sms iyo GPS raadraaca iyo la socodka.
Waxay bixisaa adeegyo tayo leh. Raadraaca iyo la socodka adeegyada waxaa ugu fiican ee la siiyo in ay u helida sms ama fariimaha fog.
Aad muhiim u ah waalidiinta-waalidka ay macluumaadka carruurta phone xitaa la socon kartaa marka aan la gaadho.
Waxa ay taageertaa network telefoonka ugu oo ay ku jiraan oo aan ku xaddidnayn Airtel, aircel, skycel, fiican gacanta, hutch iyo escotel.
Waxa aanu dabooli telefoonada BSNL iyo dadka isticmaala ku tiirsanaanta.
Dalabyo Textmarks waa madal fariin bixiya mid ka mid ah ugu wanaagsan ee adeegyada badan Fariin macaamiisha dunida dacaladeeda. Waxay ku faantaa soo diyaariyeen balaadhan oo ah dawaarle adeegyada SMS dhigay in lehid macaamiisha ah ee qaybaha kala duwan ee macmiilka. Marka la eego fudud, waxay leeyihiin liiska alaabta la adeegyada weyn oo aad kala dooran karto xiran tahay waxa aad ku habboon a.
Adeegyada imtixaanka Free
Awoodda weyn. Waxay bixisaa jiray cayn kasta oo adeegyada Fariin tiro macaamiisha ee qaybaha kala duwan laga bilaabo qaylodhaan cimilada, qaylodhaan dambiyada si ay fariimaha diinta. Sidaa darteed waxaa aan ku xaddidnayn ay shaqo.
Waa hufan. Sida ugu dhaqsaha badan u daboolaa adeegyo kala duwan oo badan fariimaha, waa weli ku ool ah in ay fuliyaan ujeedada hoose.
Bartilmaameedyo ay yihiin inta badan ganacsiga
Jaxtr.com waa adeeg bulsho isgaarsiinta ay ku jiraan tiro balaadhan oo ah qaababka ay u hubiyaan in socdaalayaasha caalamiga joogo mar walba ku xiran iyo walwalin lacag la'aan ah. Waxa kale oo ay u ogolaataa user ay u gudbinayaan fariimo iyo emails in ka yar 5 daqiiqo.
Waxaa hoos u go'an. Marka hore, waxaad u leedahay in prepay kaarka oo idinka Koriya balanqaadka iyo dhaqdhaqaaqa inta ay safrayaan.
Xiriir Free. Ma jirto lacag lagu soo oogay halka xira adeeggan.
Macaamiisha adeegyada Awesome. Waxay leedahay adeeg 24/7 qof macmiil ah oo kaliya haddii aad la kulanto dhibaatooyin marka aad isticmaalayso adeeggan.
Adeeggu wuxuu ahaa markii hore lacag la'aan ah, laakiin maadaama ay sii kordhayeen baahida dadweynaha waxaa jira eedeeyay ku lug marka la isticmaalayo adeegan.
Si ka duwan adeegyada kale ee qoraalka ballaaran, tanina waxa ay leedahay adeegyada gaarka ah. Marka laga reebo diraya fariimo ballaaran, waxa kuu ogolaanayaa inaad si ay u balan dhalmo ka dib Markay taariikhda. Waxaad sameysan kartaa waano isagoo u ah taariikh mustaqbalka ama waqti.
Xusuusinayaa qof oo ku saabsan dhacdada loogu talagalay waqti cayiman iyo taariikhda. Tani waxa ay yaraynaysaa fursadaha shakhsiyaadka ka hareen wakhtigii shirka, dhalashada iyo dhacdooyin kale oo gaar ah oo ay sabab u tahay xasuusin soo daahay.
Xusuusinta lagu kalsoon yahay oo sax ah. Xusuusinta set ayaa sida la samatabbixin doonaa haddii aad waayey in la tilmaamayo waqtiga iyo dadka qaata ka.
Hadda, waxaa laga yaabaa in aysan noqon in ay xal ugu fiican waano sms laakiin muddo ka dib laga yaabaa in ay bixiyaan adeegyada ugu fiican ee mass qoraalka haddii muuqaalada dheeraad ah iyo horumarinta waxaa loo sameeyaa.
Iyadoo adeegan dhow dahay, oo aad ku xidhan karto taleefan kasta oo ay u maareeyaan isgaarsiinta oo dhan. SMSGupShup waxaa loogu tala galay ganacsiga, waxbarashada, bangiyada, dowladda iyo hay'adaha kale oo ku doonayso in ay si joogta ah u galaan macaamiisha ay isticmaalka codka, xogta mobile ama fariimaha.
Easy in ay maareeyaan. Kuu ogolaanayaa inaad si ay u maareeyaan dhan isgaarsiinta ka mid ah shaqsiyaadka kala duwan adduunka oo dhan iyadoo la isticmaalayo muraayada kaliya.
Reliable la baaxad weyn. Waxa uu samatabbixin karo dhufsanayaasha fariimaha qoraalka ah fursado yar ee ku guuldareysteen.
Kalsoonyahay oo adeeg. SMSGupShup waa adeeg aad ku kalsoon tahay oo ay magac kala duwan iyo ganacsatada. Waxa kale oo uu leeyahay dad badan oo isticmaala shaqsi.
Arrinta gaadiidka. Sababo la users weyn, dhibaato gaadiidka waa lama huraan.
Tani waa SMS ah kooxda qoraalka ah ee telefoonada gacanta isticmaala. Waxaad si fudud u farriin qoraal kaliya soo dir Swaggle adeegga mobile oo koriyo farriimo ay u dhan shakhsiyaadka ee kooxda. Jawaab fudud oo ay xubin ka mid ah kooxda waxaa laga daawan karaa xubnaha kale ee kooxda. Waxad abuuri kartaa kooxaha labada bulsho iyo xirfadeed.
Saves waqti iyo lacag. Waxaa idinka Koriya waqti dheeraad ah oo ay gaboobeen yaabaa SMS ee xubnaha shakhsi shakhsiga ah ee kooxda. Fariimaha u dirto xubin kasta oo sidoo kale u ganay qaali.
ammaanka damaanad xogta. Waxaa la isma badbaadin marka ay timaaddo in la wadaago macluumaadka si qarsoodi ah oo ka tirsan koox gaar ah.
Tani waa web gaar ah marti adeega fariimaha ballaaran oo bixisa SMS ah oo sahlan oo dhakhso ah macaamiisha oo adduunka ah. Waa adeega ugu wanaagsan gaar ahaan haddii aad diirada macmiil waa dunida dacaladeeda. Iyada oo ku saleysan ee Australia, shirkadda bixiyaa qorshayaal xirmo macaamiisha sare oo daneynayaa inaan ololaha SMS dalal badan
Waxay bixisaa adeegyo weyn ee macaamiisha la gaarsiiyo dalal badan
Xoogaa A pricy
Mobile Yahoo kuu ogolaanayaa inaad SMS soo dir asxaabtaada, qoyska isticmaalka Rasuul Yahoo. Adeegyada Fariin waa lacag la'aan labadaba jawaabo diraya inkasta oo xogta lagu eedeeyay laga qayb galin karaa. Diritaanka farriimaha waa dagdag ah oo bixiya fursad reply.
Easy in ay isticmaalaan. Waxay u ekaan feature fariimaha ee taleefannada gacanta ee caadiga ah.
Caymiska Wide. Waxaana ay ku aaddan tiro balaadhan oo ah dal.
Arrinta gaadiidka. Tan iyo adeegyada waa bilaash oo uu leeyahay caymiska ballaaran, dhibaatooyinka gaadiidka aan la baajin karin
> Resource > Top List > Top 10 Mass Text Services fariimaha ee Suuqa